Johane mubapatidzi aive asizve aive asiri Eria
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane mubapatidzi aive asizve aive asiri Eria
Johane mubapatidzi aive asizve aive asiri Eria
Pauro akadzidzisa Timotio kudzidzisa chokwadi. Tinofanira kudzidzisawo chidzidzo chino nenzira imwechete iyi.
2 Timotio 2:24 Zvino muranda waShe haafaniri kukakavara, asi ave munyoro kuvanhu vose, unoziva kudzidzisa, unotsungirira pakuitirwa zvakaipa.
Hukama huri pakati paJohane mubapatidzi naEria hunoti shamisei.
Jesu akati Johane mubapatidzi aive Eria.
Johane akati aive asiri. Saka tingayananise sei kutaura kuviri uku?
JOHANE 1:19 Uku ndiko kupupura kwaJohane, musi vaJudha vakatumira kwaari vaPirisita navaRevhi, vachibva Jerusarema, kundomubvunza kuti : Iwe ndiwe aniko?
21 Vakamubvunza, vachiti: Asi kudiniko? Ndiwe Eria here? Akati, Handizi iye.
Eria ndiko kudana kwechiGiriki pazita rechiHebhuru rekuti Herija.
Asi Jesu paakataura pamusoro paJohane mubapatidzi, akati
MATEO 11:14 Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria, wakanga uchinzi unouya.
Kutaura kusingaitwe pese-pese, vanhu vakawanda vanokupotsa, Magwaro maviri anotaura nezvaJohane mubapatidzi akazadziswa naye muchikamu. Saka chengetai mupfungwa dzenyu kuti Magwaro maviri aya anokwanisa chete kuzadziswa kana achireva maporofita maviri, Johane mubapatidzi neumwe achauya kumberi.
Rekutanga reMagwaro maviri aya ndi
MARAKI 4:4 Rangarirai murairo waMosesi muranda wangu, wandakamuraira paHorebhi, wavaIsiraeri, vose, izvo, zvandakatema nezvandakaraira.
5 Tarirai, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa, risati rasvika.
Zuva guru rinotyisa raJehova inguva yeKutambudzika kukuru. Saka Eria uyu haarevi Eria wemaJudha anouya naMosesi kuzotendeutsira maJudha 144 000 kuna Kristu panguva yekutambudzika kukuru.
Saka Eria anofanira kuuya nguva yeKutambudzika kukuru isati yatanga. Johani mubapatidzi akauya makore 2 000 nguva yekutambudzika isati yasvika. Inguva yakarebesa chose kana Johane ari ndiye ega Eria anorehwa. Asi kana kuine umwe Eria anodiwa kuzopedzisa kuzadzisa chiporofita ichi, anofanira kuuyawo nguva yeKutambudzika kukuru isati yasvika. Asi ndiyo nguva iyo Mwari vanenge vachiri kushanda nevaHedeni. Saka zvinoita sekuti anofanira kuva muporofita muHedeni.
MARAKI 4:6 Iye achadzorera moyo yamadzibaba kuvana, nemoyo yevana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya dirove nyika nokutuka.
Eria uyu anomiririra Johane mubapatidzi. Asi hushumiri hwake hunoshamisa. Johane aifanira kutendeutsa rudzi rwemadzibaba evaJudha rwusingatendi rwaitevera Murairo kuvana vavo vaive nechokwadi, vaive Jesu nevadzidzi vake.
Kumashure kwekunge anongedza kuna Jesu, Johane akasungwa akaiswa mujere. Zvaisazoita kuti atendeutsire Jesu nevadzidzi vake kuchitendero chemadzibaba echiJudha aichengeta nekutevera murairo. Chekutanga, hakuna aikwanisa kupa Jesu nzira. Aive akakwanira paruzivo rwake. Chechipiri, madzibaba echiJudha akanga achikanganisa zvose achipikisa Jesu kusvikira pakumuuraya. Jesu angatendeukirei kutevera ivo? Aive Chokwadi, ivo vaive vatadzi.
Gwaro iri rinoreva Johane mubapatidzi.
RUKA 1:17 Uchafamba pamberi nomweya nesimba raEria, kuti adzorere moyo yamadzibaba kuvana, navasingateereri kuvuchenjeri bwakarurama agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo.
Gwaro iri rinobuditsa pachena kuti Johane mubapatidzi akangozadzisa chete chikamu chekutanga chechiporofita ichi. Akatuka vatungamiriri vechiJudha nevakuru vasingatendi akaedza kuvatendeutsira kuvuchenjeri hwaJesu nevadzidzi vake (vana) vaizoparidza apo Jesu aizovasiya.
Haana kuzadzisa chikamu chinoti.
MARAKI 4:6 ...“nemoyo yavana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka”.
Kutuka kunorarama kwenguva refu. Sehuturu hunosara panoputika chombo chebhomba reatomi. Mabhomba eatomi neehaidhirojeni ndiwo anotionesa kuipa kuchange kwakaita nguva yeKutambudzika kukuru apo vazhinji vachamedzwa nekuipa uku.
Kana chiri chokwadi kuti mumwe muporofita achauya nguva inotyisa yeKutambudzika kukuru iyi isati yatanga, hushumiri hwake huchave hweyi?
Hatingangove nemuporofita anongouya achiita zvinhu zvake ega.
Chii chaicho chinenge chichidiwa naMwari kuti aite? Anofanira kutendeutsira vana kumadzibaba avo.
I JOHANE 2:13 Ndinokunyorerai, madzibaba, nokuti munoziva iye akanga aripo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai, majaya, nokuti makakunda wakaipa. Ndakunyorerai vana vaduku nokuti munoziva baba.
Muporofita Johane ari kunyorera maKristu achararama mukati menguva yemakore 2 000 yenhoroondo yekereke. Vatendi vekutanga ndivo madzibaba. Ndivo vadzidzi nevaKristu vekutanga vakaziva Jesu.
Pakutanga vadzidzi vaidaidzwa kuti vana. Sezvo ndivo vaive zera duku zvichifananidzwa nezera revakuru revatungamiriri vemaJudha. Vadzidzi vakabva vaita vatungamiriri vekereke saizvozvo vakanyora Testamente Itsva vakararama Bhuku raMabasa avaPositora, kuti vaite madzibaba echiKristu. Johane mubapatidzi akatendeudzira madzibaba evaJudha kuvana vavo, vadzidzi vaJesu. Vadzidzi ava vakabva vakura kuva madzibaba ekereke. (Vana vanokura kuva madzibaba). Kereke yakabva yarasika nzira muNguva yeRima asi muzera mudiki wevarume, vamutsiridzi vakuru vakaita saLuther naWesley, vakabvisa kereke murima vakakunda kereke yeRoman Catholic pakubata kwayo kwakaipa pavanhu. Pakupedzisira kumagumo, zera rekupedzisira revana vaduku (vanova iwe neni) rinoda kunzwisisa zvikuru pamusoro pokuzara kwohuMwari kuitira kuti vazive kuti Jesu Kristu ane kuzara kwese kwehuMwari maari (kunova Mwari Baba) kunogara maari.
Izera rekupedzisira iri revana vaduku rinofanira kutendeutswa naEria kuti ritevere kudzidzisa kwekereke yekutanga yemadzibaba ekereke ekutanga. Hushumiri hwake ndehwekutidzosera kuBhaibheri nechokwadi chese cheTestamente Itsva. Sevana vanodzidziswa nemadzibaba avo, Kereke yenguva yekupedzisira inofanira kudzidza kubva kumapositora akanyora Testamente Itsva.
Vana vaduku havanzwisisi nyika yavanogara saka vane shungu dzekudzidza kubva kuvabereki vavo. Saka maKristu enguva yekupedzisira vanofanira kuva neshungu dzekunzwa kubva kuTestamente Itsva yakanyorwa nemadzibaba edu echiKristu. Kana tikadzokera kuTestamente Itsva kunotipa nzira nechinangwa. Tinobva tava neruzivo rwetariro yatinofanira kuva nayo. Imwe nzira ndeyekutevera makereke ariko mazhinji ese anotevera vatungamiriri vawo pakutevera nzira dzakasiyana-siyana. Vamwe nevamwe vachitenda kuti vari kugona kukunda vamwe, asi vese vari kushaiwa kuzara kweMagwaro.
Muporofita wenguva yekupedzisira haasi mumwe munhu watinofanira kutevera pazvinhu zvese zvaanoita. Tinotevera chete zvaanotaura kana akatinongedzera kuti tiite zviri muBhaibheri. Apa rinenge riri Bhaibheri ratinenge tichitevera, kwete muporofita. Kana muporofita iyeye akatiudza nhoroondo yehupenyu hwake, pamusoro penzendo dzake dzekunoshava, zvese izvozvo hazvina maturo. Unokwanisa kuzvitenda kana kusazviteedzera kana kutoona kuipa pazviri. Hazvisi chikamu chehushumiri hwake hweMagwaro. Mwari vachamuera maererano nekuti akatendeutsa vakawanda sei kuti vadzoke kuzotenda kuBhaibheri. Zvimwewo zvinhu hazvipo pachikamu chehurongwa hukuru hwaMwari hunova kufamba kweMweya kunotsvaira kupfuura munguva dzedu dzehupenyu hwechimanje manje. Kuva chikamu cherwendo rwusingaonekwe rwuri pamweya urwu ndicho chete chinhu chinoverengwa.
1 JOHANE 2:13 ... Ndokunyorerai, vana vaduku, nokuti munoziva baba.
Eria wenguva yekupedzisira anofanira kupedzisa hushumiri hwaMwari nekutijekesera kuti baba ndiyani. Anofanira kuita chokwadi chekuti abvisa kufunga kwetsika dzekumakereke otiratidza kuti kereke yekutanga yaitenda zvipi. Tinofanira kushingirira kuti tidzokere mukutenda kwekereke yekutanga kwete kukoshesa zvinhu zvavaisatenda mazviri.
Kereke yekutanga yemuTestamente Itsva haina kuti Jesu akauya. Havana kubvira vati vanoziva kuti Kutinhira kunomwe kunorevei. Havana kuti vaiziva zita idzva raJesu. Havana kubvira vatenda kuti nguva yetsitsi yakadarika. Havana kubvira vatenda kuti gore guru rinoshamisa rakaonekwa kwaive kuuya kwaShe. Saka nesuwo hatifaniri kutenda muzvinhu izvi zvese.
Pakanyorwa Testamente Itsva, havana kubvira vatenda kuti kune munhu acharwisa Magwaro kana kuti achataura kuti pane chakakanganiswa muBhaibheri. Kana kuti vakaona zvakataurwa nevanhu zviri pamusoro pezvakanyorwa muBhaibheri.
Kana tikaita kukanganganisa kwakadai, zvinongoreva kuti tatorasika chinangwa chaMwari chaakavimbisa kuti vatumire Eria.
Hushumiri hune kuita kuviri kwakareruka kunzwisisa kwatinofanira kutenderana nako.
Kubvisa kusanzwisisa pamusoro pekuzara kwehuMwari kuitira kuti tizive kuti “ndiani Mwari Baba” uye.
Kutidzosera kudzidziso yeTestamente Itsva yaive yakabatwa nevanhu panguva yekereke yekutanga.
Tsananguro yechipiri kunaJohane mubapatidzi inotisiya tiine pfungwa inoshamisa yekuti haakwanisi kuzadzisa Magwaro ese.
MATEO 17:10 Vadzidzi vakamubvunza, vachiti, Vanyori vanotaurireiko, vachiti, Eria unofanira kutanga kuvuya?
11 Akapindura, akati, Eria achauya hake, avandudze zvinhu zvose.
12 Asi ndinoti kwamuri: Eria akatosvika asi havana kumuziva; asi vakamuitira pavakada napo. Saizvozvo vo Mwanakomana womunhu uchabva wotambudzwa navo.
13 Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti wakavaudza zvaJohane mubapatidzi.
Saka Johane akauya (“akatosvika” zvakaitika kare). Saka chikamu ichocho chechiporofita chakatozadziswa. Johane akatouya akauraiwa.
Asi tarirai vhesi 11: Eria achauya hake (“acha” zviri kumiririra zvinhu zvichaitika) “avandudze zvinhu zvose”.
Zvino Jesu akatanga kutaura pamusoro pezvichaitika. Johane aive atofa.
Johane haana kuvandudza chero chinhu.
Akatanga kuzivisa Mesiah . Izvi hazvina kubvira zvaitika pakutanga izvozvo.
Akazivisa rubapatidzo rwemvura kuvaIsiraeri. Vaive vasati vamboita izvi zvachose.
Hushumiri hwaJohane ndihwo hwakatanga Ievangeri yaJesu Kristu. Rwaive rwusiri rumutsiridzo sezvo maJuda aive asati asangana neevangeri iri kubva pakutanga.
MAKO 1:1 Kutanga kweEvangeri yaJesu Kristu, Mwanakomana waMwari.
2 Sezvazvakanyorwa muvaprofita zvichinzi, Tarirai ndinotuma munyai wangu pamberi pako. Uchakunatsira nzira yako.
3 Izwi rounodana murenje, gadzirirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake.
4 Johane wakauya achibhabhatidza murenje. Achiparidza rubapatidzo rwokutendeuka vakanganwirwe zvivi.
Saka Eria achavandudza zvinhu zvose ndeupi?
Jesu akati achauya munguva inouya.
Chimwe chinhu chinofanira kuvandudzwa chete kana chichinge charasika kana kuti chaparadzwa.
Mukati meNguva yeRima chiKristu chakawira muchinzvimbo chakaipisisa chechipegani nechinyakare chisimo muBhaibheri. Luther akabva avandudza Kunatsa kweKutenda. Wesley akamutsiridza Hutsvene uye Kutevera vakarasika. Pentecositi yakavandudza rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Asi zvakavanzika zvakasara zviri pakuti vamutsiridzi vakanga vasingakwanisi kuzvitsanangura. Bvunza maKristu kuti chivi chekutanga chaive chii unowana mhinduro dzakaoma dzakaita sedzekuti “Vakanga vasingateereri”, inova mhinduro isina chainotiudza.
Bvunzai maKristu kuti Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekuti kudii vanopererwa, sezvo vasingakwanisi kuwana Zita rimwechete rekupa vanhu vatatu.
Pakabatwa mukadzi muhupombwe, Jesu akanyora kaviri muvhu. Nei? MaKristu mazhinji anongosimudza mapendekete. Kunyora kwaakaita muvhu hakuna zvakunoreva kwavari. Havangozvinzwisisi.
Saka tinoda mumwe munhu anotidzosa zvakazara kuchokwadi chese chemuBhaibheri icho chatinoda kuziva kuti tigadzirire Kuuya kwaShe.
Hushumiri hwaEria hwakagara pakutivandudzira kuti tiite kutenda kunodiwa muTestamente Itsva kwakaitwa nemaKristu ekereke yekutanga.
Ndicho chega chinhu chatinokwanisa kumutonga nacho.
Kana akataura chero chinhu chakasiyana nezviri muTestamente Itsva usateerere kutaura ikoko. Asi kana akabuditsa pachena zvinotaurwa neMagwaro pamusoro pechinhu, unofanira kumuteerera.
Basa rake rekutanga pahushumiri hwake nderekutidzosa kukereke yekutanga nekuti ndizvo zvinotaurwa nechiporofita muMagwaro. Hushumiri hwake hausi pane zvaanokwanisa kuona mune zvichauya.
Kana akatidzosa kuMagwaro, Mwari vanozomutonga kuti hushumiri hwake hwakabudirira, zvisinei nezvishoma zvaakakanganisa kana zvaasina kukanganisa.
20 Akatenda pachena, haana kuramba, akatenda pachena, achiti; Handizi Kristu.
21 Vakamubvunza, vachiti: Asi kudiniko? Ndiwe Eria here? Akati: Handizi iye. Ko uri uya muporofita here? Akapindura akati: kwete.
Saka nei Johane akaramba kuti aive Eria wekuna Maraki 4:5?
Nekuti chiporofita ichocho chaireva vaporofita vaviri saka zvakadaro aisakwanisa kuzadzisa zvose.
MARAKI 4:5 Tarira, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa, risati rasvika.
6 Iye achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana, nemwoyo yavana kumadzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nekutuka.
MaJudha havana kurangarira chakavanzika chekuti Eria aizouya kaviri.
JOHANE 1:19 Uku ndiko kupupura kwaJohane, musi vaJudha vakatumira kwaari vaPirisita navaRevhi, vachibva Jerusarema kundomubvunza, kuti: Iwe ndiwe aniko?
23 Akati: ndini inzwi rounodana murenje, achiti: Ruramisa nzira yaShe; sezvakarebwa nemuporofita Isaya.
Johane akatsigira hushumiri hwake nekudzokera kuBhaibheri kune Muporofita Isaya kwaive neGwaro raitaura nezvake.
Kana Bhaibheri richitaura pamusoro pemuporofita, chinenge chave chapupu chechipiri chinotiudza chaizvo zvinoreva hushumiri hwake. Zvinotaurwa nemuporofita achitaura pamusoro pekubata kwake chinenge chingori chapupu chimwechete. Ngwarirai zvaanotaura. Asi zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pemuporofita iyeye ndicho chapupu chechipiri, saka zvakadaro zvataurwa neBhaibheri ndicho chokwadi.
Johane, aive nenhoroondo yehupenyu yakanaka pakuzvipira kushandira Mwari sezvo akagamuchira Mweya Mutsvene achiri mudumbu, haana kubvira aisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Hushumiri chaihwo hwemuporofita hausanganisi nhoroondo yehupenyu hwake.
Hushumiri hwaJohane hwaive pakugadzira nzira yekuuya kwaJesu. Kutaura nezvake nezvinhu zvaaifarira kana zvaaifunga zvaive zvisiri pahushumiri hwake hwechiporofita.
Eria wekutanga akasvika pasina ataura kuti ari kuuya, achibva kukaguta kakasaririra keTishbe, vamwe vanoti kari mumakomo eGilead kune rumwe rutivi rweJorodhani. Vazhinji vedu hatisati tambonzwa nezveguta reTishbe. Saka kushaiwa ruzivo kwedu pamusoro pehupenyu hwaEria hakuna zvakunotadzisa pahushumiri hwake. Zvakafanana nehupenyu hwaErisha hwaisazivikanwa zvakare. Akazongosvika panzvimbo nehushumiri hwaive nesimba kwazvo hwaisabva paruzivo rwedu rwemararamiro ake. Hatizivi kuti vaive vakura zvakadii. Kana kuti vaive netsamba yekuberekwa, raingova bepa remunhu, asi raive risina charaikonzeresa pahushumiri hwavo.
Tinoziva nezvekuzvara kwaJohane mubapatidzi. Makore makumi matatu ehupenyu hwaJohane mubapatidzi asati atanga kuparidza haazivikanwe kuti airarama sei. Asi haisi nhoroondo inotodiwa kuti tinzwisise hushumiri hwake. Ini newe tinokwanisa kubata zvinoreva hushumiri hwechero mumwechete wevarume vatatu ava, mumwe nemumwe wavo aive nemweya waEria, tisingazivi mararamiro avakaita kumashure muhupenyu hwavo.
Chidzidzo-mweya waEria mukati memunhu unoita mabasa akasarudzika asingakanganiswi nezvakaitika muhupenyu hwemunhu iyeye, zvisinei nekuti vanorangarirwa vachiita zvakanaka kana kuti zvaive zvakasangana nekuipa. Isu vanhu hatina kurangarira kwezvakanaka pamusoro penhoroondo uye zvakareruka kuti tiipise zvinhu. Magwaro anosiyana zvakareruka nehupenyu hwanaEria ava mumwe nemumwe wavo. Tinofanira kungotevera zvavanoita kubva ipapo tichienda mberi.
Eria akarasa chizodzo akatiza mukadzi mumwechete, Jezebheri. Uku kwaive kuita kwaisafadza sezvo aive murume mumwechete iyeye, aive nekuzodzwa, akanamata moto ukaburuka kubva kudenga ukapisa chibairo ukauraya vaporofita vaBhaari vaisvika 450. Mwari vakamubatira here kutiza kwekutya kwaakaita kuya? Kwete. Mwari vakatumira ngoro yemoto kuzomutakura kuenda naye kumusha kudenga.
Saka tinofanira kutonga Eria nezvakanaka zvaakaita, kwete nezvaakatadza.
Usamhanya kuzvidza maporofita aMwari. Mwari vanoashandisa kuzadzisa hushumiri hwakasarudzika. Kana vakatadza pane zvimwe zvinhu, zvinongoreva kuti vanhu venyama. Johane mubapatidzi aive asina kutya pakunongedzera Jesu Kristu saMesiah. Asi pamberi, paakakakavara kuti Jesu aive Mesiah (kwaive kutadza kukuru), Jesu akafuratira zvaakatadza nekuti Johane mubapatidzi akanga azadzisa Magwaro aitsanangura hushumiri hwake. Zvakaitwa naJohane zvakanaka maererano nehurongwa hwaMwari Magwaro, zvakakunda kutadza kwese kwaakaita (zvisinei nekukura kwazvo).
Johane mubapatidzi akaparidza zvakawanda zvisina kuzonyorwa pasi.
RUKA 3:18 Akaparidzira vanhu evangeri, achivaraira namamwe mashoko mazhinji;
Johane haana kusiya zvinyorwa zvekumwe kuparidza uku nekuti kwaingove kutsigira hushumiri hwaaive akadanirwa chaihwo, hwaive kunongedzera Jesu Kristu seMunhu aifamba pakati pevanhu. Zvaakataura pamusoro pedzimwe nyaya hazvina kutorwa zvakakosha zvekuti zvaizonyorwa muBhaibheri nekuti zvaive zvisiri izvo chaizvo zvaive muhushumiri hwake, hwaive kunongedzera Mesiah.
Jesu akatonga Johane mubapatidzi zvakanakisa pakukwanisa kwake kuzadzisa Magwaro aitaura nezvaJohane.
MATEO 11:9 Asi makanga mabudireiko? Kuzoona muporofita here? Hongu ndinoti Kwamuri, unopfuvura kwazvo muporofita.
10 Nokuti ndiye akanyorwa pamusoro pake zvichinzi, Tarira ndinotuma munyai wangu pamberi pako, uchakugadzirira nzira yako pamberi pako.
11 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri; kuna vakaberekwa navakadzi hakuna kumuka mukuru kuna Johane mubapatidzi, asi muduku muvushe hwokudenga mukuru kwaari.
Muporofita anoyerwa nekugona kwake kuzadzisa Magwaro akanyorwa pamusoro pake. Ndiko kufamba kwakavanda kwemhepo yeMweya yemuono mukuru waMwari (hurongwa hwaMwari hwakanakisa) inotsvaira mukati menhoroondo yevanhu sedutu guru rinoparadza remweya risingaonekwi. Zvese zvinoitwa nemaporofita, zvakanaka kana zvakaipa, zvingori chikamu chepano panyika, chemuono wevanhu (zvakafanana nekusimuka kwemvura kubva payakanjenga) hazvina zvazvinokanganisa paMuono Mukuru waMwari.
Saka zvakakosha kuti tizive kuti chiporofita chemuBhaibheri chinotii pamusoro pehushumiri hwemuporofita uye tinofanira kubvumira zvaanotaura chete kana achizadzisa Magwaro iwayo.
Hatimanikidzwi kutenda zvaanotaura kana achitaura nezvezvimwewo zvinhu.
Muporofita anoyananisirwa chete kana akazadzisa Magwaro anotaura nezvake.
Wakasununguka kusiyana nezvaanoita kana kutaura nezvazvo kana achinge asiya kana kuenda kunze kwemiganhu yeBhaibheri.
Ndiyo yakava budiriro yekupedzisira yehushumiri hwaJohane.
Akanongedzera Jesu kuvadzidzi vake, ivo vakamutevera.
Vadzidzi vakaziva Johane, asi vakagara vakatevera Johane, vairwadzisa kwazvo. Pakakakavara Johane pamusoro paJesu naivowo vakakakavara kuti Jesu aive Mesiah. Izvozvo zvadarika, apo zvakataurwa naJohane zvakarwisa Magwaro, vateveri vaJohane vakangopararira havana kuzonzwikwa nezvavo zvakare. Kutevera muprofita chaisava chinhu chakanaka.
Asiwo, vadzidzi vaJohane vakanzwa achiparidza vakatevera Jesu (Shoko) vakashandura nyika yose, nanhasi tichiri kurangarira mazita avo nemabasa avo.
Muporofita angori zvikwangwani zvinonongedzera kuna Jesu. Paanofamba nemapeji eBhaibheri achidzidzisa Shoko raMwari. Mazwi emuporofita akangokosha kana achitsanangura nekudzidzisa Bhaibheri. Tinofanira kuzodzokera kuBhaibheri totevera zvakanyorwa tofananidza zvataurwa neBhaibheri nedzidziso yemuporofita kuti tizive kuti ichokwadi.
33 Makatuma kuna Johane, iye akapupura zvokwadi.
35 Iye wakanga ari mwenje unopfuta nounovheneka; Imi makanga muchida kufara nguva duku muchiedza chake.
Zvakataurwa naJohane mubapatidzi zvaisakwanisa kumira zvega. Zvaida kuti zvinongedze kuna Jesu kuti zviite chiremerera.
Pachauya Eria zvakare, zvaachange achitaura zvichange zvisina chiremera zviri zvega zvakare.
Zvaachataura zvinofanira kuzopenyerana neMagwaro zvotsigirwa neBhaibheri zvisati zvatambirwa sechokwadi, nekuti Jesu ndiye Shoko raMwari.
Johane mubapatidzi akati:
Ichi ndicho chokwadi pamusoro pemuporofita wese. Muporofita anofanira kunongedzera vanhu kuna Kristu iye onyangarika kana aenzaniswa naKristu.
Avo vanotevera muporofita (sevadzidzi vaJohane) pachinzvimbo chekutevera Kristu vacharasikirwa nekuona kwavo vokakavara uye kurwisa Shoko sezvo ivo vanenge vakabatirira pamashoko akataurwa nemuporofita.
Avo vakanzwa muporofita achiparidza vakatendeutsirwa kuBhaibheri, vakatevera chokwadi chedzidziso yavo ichibva muMagwaro ichienda kuMagwaro, vachave nechiedza cheBhaibheri chakanakisa vachakunda kuva mhandara dzakangwara.
Mabiko eMuchato weGwaiana akaitirwa ivo. Vachadya.
Nekuti zvimwe zvese ikoko zvikara, saka vanozodyiwa.
ZVAKAZARURWA 19:17 Zvino ndakavona mutumwa amire muzuva; akadanidzira nezwi guru, achiti kushiri dzese dzinobhururuka pakati pedenga: Vuyai, muvungane pachirairo chikuru chaMwari.
18 Kuti mudye nyama yamadzimambo, nenyama yavakuru vezvuru zvamazana, nenyama yavanesimba nenyama yamabhiza, neyavatasvi vawo nenyama yavanhu vakasununguka navakasungwa, vaduku navakuru.